Kule ngqaku inolwazi oluxabisekileyo luye lwaziswa, kwaye namhlanje siza kuxubusha umxholo wendaba ethi "Iindlela ezilungeleleneyo zokulwa ne-cellulite". Ikhumba lidla ngokuthelekiswa ne-velvet, i-satin ephosa phambili, ipayipi ethandekayo ... Kwaye ngamanye amaxesha - ene-orange enobhubhane. Kwinqaku yokugqibela ayizange ivezwe kwidilesi yakho, siya kukuxelela indlela yokukhetha ikhambi lokulwa ne-cellulite.
Kwiivenkile, ngokubonakalayo iindlela ezingabonakaliyo ze-cellulite, kwaye uluhlu lwabo luhlaziywa rhoqo. Akulungele ukubeka abantu ukuba bafumane iithwele zabo kwiindidi ezahlukeneyo kwaye bathathe oko kunceda ngokwenene ukulungisa ingxaki. Kodwa oku kuqale ukujonga. Enyanisweni, zonke iimali kwieshelulo ziyakwazi ukwahlula zibe ngamaqela amabini: ezo zikhusela ukubonakala kwe "peel orange", kunye nezo ziphelisa iziphoso ezikhoyo zesikhumba. Ukwazi oku, ukuthenga ukhilimu ofanelekileyo kulula.
Iindlela zokuqala zeqela zisetyenziswe kwiinqanaba zokuqala ze-cellulite, xa ulusu luhlala luhamba kakuhle, okanye kwiimeko apho ungabona khona "izilwanyana" zaseburhulumenteni, kuphela ngokukrazula isikhumba. Okudabukisayo njengoko kunokwenzeka, elowo mfazi unesisululwazi seesisombululo ezihlukeneyo. Inkqubo yoqulunqo lwayo iqala ukususela ebusheni, ngexesha lokutshatyalaliswa. Okokuthi, iimali zokuqala ezivela kwiqela lokuqala zifunekayo kumantombazana aneminyaka engama-14-15. Kodwa ngokukodwa ziyimfuneko ukuba:
Umthamo wezintlu waqala ukwanda ngokukhawuleza (zonke ezinye izilinganiso azitshintshi ngexesha elinye).
Ngokuhlwa, imilenze, ngokukodwa umlenze ongezantsi kunye neenyawo, zivule (oku kubonisa ukuba ukucoca i-lymph yenzekile kwaye inkqubo iyaqhubeka, okuya kubangela ukutshintsha kwezinto eziphathekayo kwizitenxo ezinqamlekileyo "ezilununu").
Ukuba umnwe ucinezelwa kwesikhumba kwindawo ekuthiwa yinkinga, kukho indawo emhlophe ebonakalayo ehlala malunga nemizuzwana engama-5 (lo mqondiso: umzimba waqala ukuhlawulela umbane, i-lymph microcirculation ibuhlungu). Iimpawu ezichazweyo zibonisa ukuba i-cellulitis yaqala ukuphuhlisa ngakumbi, kwaye kungekudala izitenxo ezingabonakaliyo ziya kubonakala kwiso iso (kwaye akuyimfuneko ukuba zonke izibonakaliso ezintathu zikhona - enye yanele). Ukuqala kweli nqanaba ukusetyenziswa rhoqo kwiimali ezivela kwiqela lokuqala, unciphise kakhulu inkqubo engathandekiyo.
Bala indlela yokuthintela kunye neyona ndlela efanelekileyo yokulwa ne-cellulite kwii-shelves zeentengiso ezinokubakho nokubunjwa (njalo kuboniswe kwiphakheji okanye kwimilayezo). Ukongeza kwizenzo ezichasene ngqo ne-cellulite, kufuneka zivuselele umsele wamanzi kwaye ziqinise iindonga zeempahla (umjikelezo we-lymph ukonakala ngakumbi apho zibuthathaka khona). Ewe, ukuba ukwakhiwa kwekhilimu evimbela i-cellulite, kubandakanya i-seaweed-inefuthe elifanelekileyo lomlambo wamanzi. Ngenjongo yokukhusela, i-anti-cellulite creams kufuneka isetyenziswe imihla ngemihla, ingayisebenzisi nje kuphela emagqabini nakubhokhwe, kunye nomhlaba wonke emilenzeni, uqala kwiindawo. Ukuphucula umphumo, emva kokusebenzisa ukhilimu imizuzu emi-5 ukuya kwimizuzu, uphathwe ingingqi yeengxaki nge-massage roller ekhethekileyo. Ngezihlandlo ezimbini ngeveki, sebenzisa i-scrub. Ngendlela, kwezinye iindawo zokutshiza kunye nokutshiza kubhaliwe ukuba zinezenzo zokulwa ne-cellulite. Nangona kunjalo, oku akukwenyani ngokupheleleyo: ngaphandle kokusetyenziswa kwentswelo ekhethiweyo imihla ngemihla, i-scrub ayiyi kusebenza.
Iimpawu zeqela lesibini zisetyenziselwa xa i "peel orange" ibonakala ibonakala ngokucacileyo. Banceda ukubuyisela ukunyanzelisa kwe-epidermis. Ukufumana isixhobo esinjalo kwivenkile kuya kunceda ukubunjwa kunye nenjongo. I-Cosmetics, echaphazela ukungalingani kwesikhumba, kufuneka ibe nempopolytic effect. Kungcono ukuba ukwakhiwa kwekhilimu kufaka zonke ezo zinto zibhalwe apha ngasentla, kunye ne-ivy, i-caffeine kunye ne-carnitine. Ezi zinto zikhuthaza ukucoca kwe lipids, kwinqanaba lokuqala le-cellulite azidingeki. Iimpawu ezichaphazela "i-orange peel" zisetyenzisiwe ukusuka ezinyaweni ukuya okhalweni, zimele zisetyenziswe imihla ngemihla. Isenzo semali siya kuqiniswa kungekuphela kwesikratshi kunye ne-massage, kodwa nangemidlalo. Ngenxa yeziphumo eziphezulu, i-lipolytic anti-cellulite isilungiso kufuneka isetyenziswe ngokukhawuleza emva kokuqeqeshwa, xa inkqubo yokuqhekeka kwamafutha isebenza ngokukodwa. Imiphumo yokuqala ebonakalayo yemiphumo yezonyango ibonakala malunga nenyanga nesiqingatha: ulusu luqala ukucosa, ukuvuvukala kuyahamba, imilenze imele ingakhathali.
Yiyiphi into engenakwenzeka ukwenza okanye eyenzayo kwabasetyhini abakhulelweyo? Icandelo 1
Iingcamango malunga nokuzilahla kwabesifazane
Kwiindlela ezilungileyo zaseRussia: isibane ngesimo sesigxina
Indlela yokukhetha iingubo ezide ezide kwi-prom
I-Horoscope yeSagittarius-abafazi ngo-Apreli 2017
Indlela yokuphakamisa umntakwabo kwintsapho
Iidlobo zokuhlwa zenziwa nguOksana Mucha
Uphuhliso lwengqondo lomntwana osemdala